Rut 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Boaz gbaara Rut (1-12)
Rut mụụrụ Boaz Obed (13-17)
Usoro ọmụmụ Devid (18-22)
4 Boaz gara n’ọnụ ụzọ ámá obodo+ nọdụ ala. Ma, onye kwesịrị ịgbara nwaanyị ahụ, bụ́ onye Boaz kwuru banyere ya,+ na-agafe. Boaz wee sị: “Enyi m, bịa nọdụ ala ebe a.” O wee bịa nọdụ ala. 2 Boaz akpọzie ndị okenye iri n’obodo ahụ+ ma sị ha: “Nọdụnụ ala ebe a.” Ha wee nọdụ ala. 3 Boaz agwazie onye kwesịrị ịgbara nwaanyị ahụ,+ sị: “Naomi, onye si n’ala Moab lọta,+ ga-ere ibé ala nwanne anyị nwoke Elimelek.+ 4 M chere na m kwesịrị ịgwa gị ka ị zụrụ ya n’ihu ndị obodo a na ndị okenye ndị m.+ Ọ bụrụ na ị ga-agbara ya, gbara ya. Ma ọ bụrụ na ị gaghị agbara ya, gwa m ka m mara, n’ihi na ọ bụ gịnwa kwesịrị ịgbara ya. Ọ bụkwa m na-esote gị.” O wee sị: “M ga-agbara ya.”+ 5 Boaz agwazie ya, sị: “Ụbọchị ị ga-azụ Naomi ala ahụ, ọ bụkwa Rut nwaanyị Moab, bụ́ nwunye nwoke ahụ nwụrụ anwụ, ka ị ga-azụ ya, ka ala nwoke ahụ nwụrụ anwụ ghara ịgara ndị ọzọ.”+ 6 Onye ahụ kwesịrị ịgbara nwaanyị ahụ wee sị: “Agaghị m agbarali ya. M gbara ya, ọ ga-aghọ m ahịa. Were ikike m nwere ịgbara ya gbara ya n’ihi na agaghị m agbarali ya.” 7 Ihe ndị Izrel na-eme n’oge ochie mgbe ọ bụla e kwekọrịtara ka mmadụ gbara ihe ma ọ bụ ka o nye onye ọzọ ikike ịgbara ihe bụ na nwoke na-eyipụ akpụkpọ ụkwụ ya+ nye onye nke ọzọ. Ọ bụ otú a ka ndị Izrel si egosi na ha kwekọrịtara n’ihe e kwuru. 8 N’ihi ya, mgbe onye ahụ kwesịrị ịgbara nwaanyị ahụ sịrị Boaz, “Zụrụ ya,” o yipụrụ akpụkpọ ụkwụ ya. 9 Boaz agwazie ndị okenye na mmadụ niile, sị: “Unu bụ ndị akaebe+ taa na m na-azụ Naomi ihe niile bụ́ nke Elimelek nakwa ihe niile bụ́ nke Kilịọn na Malọn. 10 Ana m agbarakwa Rut nwaanyị Moab, bụ́ nwunye Malọn, ka ọ bụrụ nwunye m. Ihe a ga-eme ka ala nwoke ahụ nwụrụ anwụ ghara ịgara ndị ọzọ,+ meekwa ka ụmụnne ya na ndị obodo a ghara ichefu aha ya. Unu bụ ndị akaebe taa.”+ 11 Ndị niile nọ n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ na ndị okenye wee sị: “Anyị bụ ndị akaebe. Ka Jehova mee ka nwunye gị nke na-abata n’ụlọ gị dịrị ka Rechel na Lia, bụ́ ndị mụtara mba Izrel.+ Ka ihe gaziere gị n’Efrata,+ ka i nweekwa aha ọma* na Betlehem.+ 12 Ka ụmụ Jehova ga-eme ka nwaanyị a mụtara gị+ mee ka ụlọ gị dị ka ụlọ Pirez,+ onye Tema mụụrụ Juda.” 13 Boaz wee kpọrọ Rut, ya abụrụ nwunye ya. Ya na ya enwee mmekọahụ, Jehova emee ka ọ dịrị ime. O wee mụọ nwa nwoke. 14 Ụmụ nwaanyị wee sị Naomi: “Ka otuto dịrị Jehova, onye na-ekweghị ka ị ghara inwe onye ga-agbara gị taa. Ka a kpọsaa aha nwa a n’Izrel. 15 O* nyeghachila gị ndụ.* Ọ ga-elekwa gị nká, n’ihi na ọ bụ nwunye nwa gị nke hụrụ gị n’anya,+ onye ka ụmụ nwoke asaa mma, mụrụ ya.” 16 Naomi kuuru nwa ahụ kukwasị n’obi ya ma na-elekọta ya.* 17 Ụmụ nwaanyị ndị agbata obi ya wee gụọ nwa ahụ aha. Ha sịrị: “A mụọlara Naomi nwa nwoke.” Ha gụrụ ya Obed.+ Ọ bụ ya mụrụ Jesi,+ nna Devid. 18 Ndị a bụ ndị si n’ezinụlọ Pirez:+ Pirez mụrụ Hezrọn;+ 19 Hezrọn amụọ Ram; Ram amụọ Aminadab;+ 20 Aminadab+ amụọ Nashọn; Nashọn amụọ Salmọn; 21 Salmọn amụọ Boaz; Boaz amụọ Obed; 22 Obed amụọ Jesi;+ Jesi amụọ Devid.+
^ Na Hibru, “aha gị dee ude.”
^ Ya bụ, nwa nwa Naomi.
^ Ma ọ bụ “bụrụ onye na-eku ya.”